Microsoft Server 2019 AD,DNS Installation & Configuration Video Tutorial – Myanmar IT Academy
3 weeks agoVMware Esxi 7.0 OS installation on VMware Workstation3weeks agoMyanmar Fonts Solution Tutorial 1 month agoMac OS Mojave 10.14 Installation on VMware Workstation Pro 15.5 Tutorial 1 month agoSynology ISCSI LUN & ISCSI Target Create Tutorial 1 month agoSynology Raid Group & Volume Create Tutorial
Microsoft Server 2019 AD,DNS Installation & Configuration Video Tutorial
Posted On : May 29, 2019 Published By : mmit
Hello Everybody!! ကျွန်တော် ဒီနေ့ခင်းတော့ အချိန်ရတုန်းလေး
Microsoft Server 2019 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Tutorial ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Microsoft Server 2019 မှာ AD & DNS installation & Configuration Tutorial လေးပါ။
ကျွန်တော် အရင်က Microsoft Server AD နှင့် DNS ပတ်သက်တဲ့ Tutorial တွေကို
Server 2008,2012 ,2016 တို့ မှာ လည်း တင်ပေးထားပြီသားပါ။
Microsoft Server ရဲ့ Active Directory ဆိုတာ ဘာလဲ
DNS ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာတွေကို အခြေခံမသိသေးသူများကတော့
Microsoft Server 2016 AD & DNS Tutorial မှာ ပြန် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အခု Microsoft Server 2019 မှာတော့ အခြေခံတွေ မပြောတော့ပဲ
တစ်ခါထဲ့ AD & DNS Role တွေ စ မတင်ခင်လိုအပ်တာလေးတွေ
အနည်းငယ် ရှင်းပြပြီး Lab ပုံစံတွေပဲ သင်ပေးထားပါသည်။
ဒီ Tutorial ကတော့ Microsoft Exam ဖြေမယ့်သူများအတွက်ရော၊
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးချမည့်သူများအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ Video Tutorial တွေကို
လေ့လာပြီး ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ရင် ကျေနပ်ပါပြီဗျာ။
Hello Everybody!! ကြှနျတျော ဒီနခေ့ငျးတော့ အခြိနျရတုနျးလေး
Microsoft Server 2019 နဲ့ပတျသကျတဲ့ Tutorial ထပျတငျပေးလိုကျပါတယျ။
Microsoft Server 2019 မှာ AD & DNS installation & Configuration Tutorial လေးပါ။
ကြှနျတျော အရငျက Microsoft Server AD နှငျ့ DNS ပတျသကျတဲ့ Tutorial တှကေို
Server 2008,2012 ,2016 တို့ မှာ လညျး တငျပေးထားပွီသားပါ။
Microsoft Server ရဲ့ Active Directory ဆိုတာ ဘာလဲ
DNS ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာတှကေို အခွခေံမသိသေးသူမြားကတော့
Microsoft Server 2016 AD & DNS Tutorial မှာ ပွနျ လလေ့ာနိုငျပါသညျ။
အခု Microsoft Server 2019 မှာတော့ အခွခေံတှေ မပွောတော့ပဲ
တဈခါထဲ့ AD & DNS Role တှေ စ မတငျခငျလိုအပျတာလေးတှေ
အနညျးငယျ ရှငျးပွပွီး Lab ပုံစံတှပေဲ သငျပေးထားပါသညျ။
ဒီ Tutorial ကတော့ Microsoft Exam ဖွမေယျ့သူမြားအတှကျရော၊
လုပျငနျးခှငျမှာ အသုံးခမြညျ့သူမြားအတှကျလညျး အသုံးဝငျပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့ လမျးညှနျပေးတဲ့ Video Tutorial တှကေို
လလေ့ာပွီး ကောငျးကောငျးအသုံးခနြိုငျရငျ ကနြေပျပါပွီဗြာ။
OU & User Create Command Note
dsadd ou “ou=Network,dc=mita,dc=com” dsadd user “cn=user01,ou=Network,dc=mita,dc=com” -pwd user123!@# -pwdneverexpires yes -disabled no dsadd user “cn=user02,ou=Network,dc=mita,dc=com” -pwd user123!@# -pwdneverexpires yes -disabled no dsadd user “cn=user03,ou=Network,dc=mita,dc=com” -pwd user123!@# -pwdneverexpires yes -disabled no dsadd user “cn=user04,ou=Network,dc=mita,dc=com” -pwd user123!@# -pwdneverexpires yes -disabled no dsadd user “cn=user05,ou=Network,dc=mita,dc=com” -pwd user123!@# -pwdneverexpires yes -disabled no
Posted in: Microsoft Server Video Tutorials, Video Training Collection